Mpanamboatra fanafody famonoana bibikely sy famonoana vovoka - mpamatsy fanafody famonoana otrikaina sy vovo-tany any Sina
silila voajanahary voajanahary
Ny tany feno an'ny mpikarakara
diatomite kieselguhr diatomaceous zezika S ...
fambolena sy fiompiana bibikely famonoana bibikely na bibikely famenoana bibikely
Topimaso Topy Mazava ho azy Toerana niaviany: JIlin, Sina Anaran'ny marika: Dadi Anaran'ny vokatra: vovoka diatomite Kilasy: kilasy sakafo fisehoana: vovo famatsiana fahafaha-manao
vovo-tany simika mahomby diatomite vovoka additives pestiside manokana
Overview Quick Details CAS No .: 61790-53-2 / 68855-54-9 Anaran-kafa: Celite MF: SiO2.nH2O EINECS No. .: 212-293-4 Toerana niaviany: Jilin, State of China: GRANULAR, Fahadiovan'ny vovoka: SiO2> 88% Applica ...
F30 TL301 simika fiompiana diatomita mahomby Pimentide additives fambolena manokana diatomaceous
mahomby diatomite Pesticide additives manokana mavokely bibikely bibikely famonoana bibikely ho an'ny bibikely
zezika simika fambolena fanafody famonoana bibikely
Topy maso amin'ny antsipiriany haingana Toerana niaviany: jilin, Sina Anaran'ny marika: Dadi Model Number: TL301 / F30 / TL601 fanasokajiana1: fanasokajiana bibikely3: mpandrindra ny fitomboan'ny zavamaniry habe: 14/40/80/150/325 harato PH: 5-11 ...
additives famonoana bibikely mahomby eto an-tany
Ny tany diatomaceous dia azo indrindra amin'ny alàlan'ny fanendasana, famonoana ary fanaovana grady hahazoana vokatra miendrika endrika, ary ny atiny amin'ny ankapobeny dia takiana farafahakeliny 75% na mihoatra ary atiny biolojika ambanin'ny 4%. Ny ankamaroan'ny tany diatomaceous dia maivana amin'ny lanja, kely amin'ny hamafiny, mora torotoro, mahantra amin'ny fanamafisana, ambany ny hakitroky ny vovoka maina (0,08～0.25g / cm3), afaka mitsingevana amin'ny rano, ny sanda pH dia 6～8, mety tsara amin'ny fanodinana Carriers vovoka azo lena. Ny lokon'ny diatomite dia mifandraika amin'ny fahadiovany.
diatomite vovon-tsakafo pestisida manokana mahomby
Carrier na Filler dia zavatra tsy mitongilana amin'ny fikarakarana famolavolana pestiside. Ny asany lehibe indrindra dia ny fiantohana ny atin'ny akora famonoana otrikaretina poizina amin'ny vokatra vita ary manaparitaka ireo akora mavitrika amin'ny fanafody tany am-boalohany miaraka amin'ireo surfactants nampiana sy ireo akora hafa. Ny fifangaroana fanamiana dia natsangana mba hitazomana ny fanaparitahana sy ny fizotran'ny vokatra; miaraka amin'izay dia mihatsara ny fanatanterahana ny vokatra ary azo ampiasaina aorian'ny diovina anaty rano soa aman-tsara.
fanamainana miasa mahomby poizina famonoana poizina famonoana poizina
Ny tany diatomaceous dia vato sedimentary miely be, izay mora vovoka ary vovoka mahery. Bibikely famonoana bibikely ao an-tokantrano na zaridaina izy io. Tany mahafaty dia mety mamono bibikely. Ny tena mihetsika amin'ny asany dia ny famonoana bibikely amin'ny alàlan'ny fihetsika ara-batana. Ny antony dia ny tany diatomaceous dia miforona amin'ny alàlan'ny fametrahana akorandriaka voapetraka amin'ny diatom. Ity zavamiaina bitika ity dia manana akorandriaka maranitra toy ny fanjaitra.
diatomite F30 TL301 Pesticide additives manokana vovoka fotsy / mavokely
vovoka bibikely misy vidiny tsara indrindra diatomite vovoka famonoana bibikely
Overview Quick Details CAS No .: 61790-53-2 / 68855-54-9 Anaran-kafa: Celite MF: SiO2.nH2O EINECS No. .: 212-293-4 Toerana niaviany: Jilin, Sina State: Fahadiovan'ny vovoka: SiO2> Fampiharana 88%: ...
Famatsiam-pamokarana diatomite tany rotenone vovoka bibikely
diatomaceous tany diatomite vovoka bibikely famonoana bibikely noho ny famonoana bibikely amin'ny vidiny tsara indrindra